Vemhando yepamusoro USB Flash drive vagadziri Swivel usb tsvimbo swivel 32gb 64gb 128gb vagadziri uye vanotengesa | M-Mambokadzi
Vemhando yepamusoro USB Flash drive vagadziri Swivel usb tsvimbo ino swivel 32gb 64gb 128gb
USB 2.0 Thumb Drive ndeye plug uye tamba pasina chero software yekuisa; Ingoisa chigunwe kutyaira muchigadzirwa kuti uchinjise uye uchengetedze data pakati pemidziyo. Iyo Fold Storage Pen Drive Inotsigira Windows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux uye Mac OS, uye inowirirana ne USB 2.0 uye USB 1.1 zviteshi.
• USB 2.0 Thumb Drive ndeye plug uye inotamba isina chero software yekuisa; Ingoisa chigunwe kutyaira muchigadzirwa kuti uchinjise uye uchengetedze data pakati pemidziyo. Iyo Fold Storage Pen Drive Inotsigira Windows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux uye Mac OS, uye inowirirana ne USB 2.0 uye USB 1.1 zviteshi.
• USB Flash Drive inoratidzira yakasimba uye ine makobvu ABS uye Metal imba yemuviri ine yakatenderera dhizaini. Iyo 360 ° yakatenderedzwa dhizaini inogadzirwa kubva kune isina simbi simbi, uye chikamu chemukati chakagadzirwa neABS plastiki.
• USB Flash Drive iri 58mm × 19.5mm × 10.8mm, uye inoita kuti zvive nyore kutsvedza muhomwe yako. Kuguma kwechigunwe chekutyaira kune chiuno chinosungirirwa nyore kuketani yako yakakosha kana lanyard, uchishandisa kubatsira kuchengetedza kubva pakurasikirwa, uye nekutakura nyore.
• Ose maUSB anotya akaedzwa zvakaomarara uye akaumbwa asati abva mufekitori. Uye isu tinopa gumi nemaviri mwedzi waranti sevhisi, kana iwe uine chero mibvunzo ndapota tumira e-mail kwatiri, vatengi vedu masevhisi vachakupindura iwe mukati me24hours.
Zvadaro: 64MB-64GB Faux Leather USB Flash Drive
16GB / 32GB yakagadzirirwa dhizaini LOGO USB Drive
MQ-GS01 JoyCon yeNintendo Shandura